Ciidamada Booliska dalka Kenya ayaa waxa ay xabsiga dhigeen 33 ruux oo intooda badan ah dad Somali ah – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Booliska dalka Kenya ayaa waxa ay xabsiga dhigeen 33 ruux oo intooda badan ah dad Somali ah, kadib markii ciidamada ay sameeyeen howlgalo ammaanka Nairobi la xiriira.
Dadka ciidamada Booliska ay soo qabteen ayaa waxaa ku jira dad ka soo jeeda Suudaanta Koonfureed, balse tirada ugu badan waa dad Somali ah oo Booliska ay ku eedeynayaan inaysan haysan sharciga dalka Kenya.
Taliyaha ciidamada Booliska Magaalada Nairobi Japheth Koome, ayaa Warbaahinta u sheegay dadka la soo qabtay inaysan haysan warqadaha Ogolaanshaha joogitaanka dalka Kenya.
Taliyaha ayaa sheegay in dadkaasi ay ka soo muuqan doonaan maxkamada magaalada Nairobi, isagoo intaasi raaciyay in saddex ka mid ah dadka laga shakiyay ay u dhasheen dalka Sudan-ta koofureed.
“Haddii halkaan uu joogo qof Qaxooti ah oo uusan heysan warqada ogolaanshaha waa dambiile, dadkaasi ha is diiwaan geliyaan sababtoo ah ciidamada ammaanka ma siinayaan wax fursad ah mar haddii ay qabtaan.”Ayuu yiri taliyaha.
Taliyaha ciidamada Booliska Nairobi ayaa sidoo kale sheegay in la adkeeyay ammaanka Magaalada Nairobi, wixii ka dambeeyay weerarkii Magaalada Paris ay ka geysteen Daacish Jimcihii la soo dhaafay.
Todobaadkii hore ciidamada amaanka ee dalka Kenya ayaa qabtay sagaal ruux oo Ethiopian ah oo shaki dhanka amaanka laga qaaday.